စိတ်တိုင်းကျသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် attribute ကိုနှင့်သင်၏ Oppa Gangnam ဒီဟီလာရီမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာသူ့ကို powered ပါ!
Super Mario ကာကွယ်ရေး
သင့်ရဲ့ရဲတိုက်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ orcs, minotaurs, cobolds နှင့်ဆိုးရွားလင်းနို့၏လှိုင်းပြီးနောက်လှိုင်းချွတ်တိုက်ခြင်း။ ရွှေကိုစုဆောင်းပါနှင့်သင့်လေး, မြှား, Dexter နဲ့ရဲတိုက်တံခါးများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။
ထိုဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ငှက်တို့သည်အထက်တန်းလွှာလေထီးနှင့်သင်၏ပိုင်နက် bombarding နေကြတယ်အဖြစ်အားလုံးအဘိဓါန် Beaver ကြင်နာဘို့မိုဃ်းတိမ်ကိုခုခံကာကွယ်။ ထိုအဘိဓါန် Beaver Cannon ပျဉ်ပြားနှင့်ဤအခမဲ့အွန်လိုင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အမွေးတောင်များကျူးကျော်ပစ်ချ!
နိုက်နှင့် kastles 2
ဒီဂိမ်းအားလုံးသင်ဤသည်စစ်တိုက်သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းခုခံနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးသူရဲနှင့်အတူမဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်ရှိသည်ဘယ်မှာစစ်သူရဲများနှင့်ရဲတိုက်, အကြောင်းပါ။ အပြန်အလှန်ရန်သင့် mouse ကိုသုံးပါနှင့်မြှားရွှေ့ဖို့။
Dracula တစ်ပါတ်အဘို့အိမ်တော်ကိုကြည့်ရှုရန်လက်ထောက်ငှါး၏။ သင့်ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မလိုလားသောဧည့်သည်များမှထရပ်နှင့်နဂိုအတိုင်းသင်္ချိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
သူကအမြဲလူရဲ့မြေယာအခွင့်အရေးယူကြောင်း, အိမ်ခြံမြေလိမ်လည်မှုဖြစ်ပါတယ်ပိုက်, မတရားသောစီးပွားရေးသမား FunLand သို့အရမသွားပါစေပါနဲ့။ ဒီအခမဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုမှသင်၏ FunLand ခုခံကာကွယ်!
အီဂျစ်အင်ပါယာမငြိမ်မသက်အတွက်ပါ! ထိန်းချုပ်မှုရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏နှစ်ခုစစ်ရေးအုပ်စုရှိပါတယ်။ ဒီအခမဲ့အွန်လိုင်းမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးဂိမ်းထဲမှာရပ်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဖြစ်!
Pando ဟာအလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်။ DaDa လူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာရှိအလုပ်လုပ်ကြပြီ။ သို့သော်တစ်နေ့တွင်, အခြားအနွယ်ပျော်ရွှင်သောမြေယာကျူးကျော်။ သတ္တုတွင်းမှမိုင်းလုပ်သား Recuit နှင့်ထိုရန်သူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့်အတူတူအိမ်မှာခုခံဘို့စစ်တပ်တည်ဆောက်ရန်ငွေရှာ
ကိုယ်ပွား - ကွေးစစ်တိုက်
ဂိမ်းအနိုင်ရမင်းသား Zuko နှိမ်နင်း။
humaliens စစ်တိုက် 3
သငျသညျရနျသူအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သူတို့ကိုပယ်ပေးပို့အဖြစ်စစ်သား, လေယာဉ်ယူနစ်နှင့်ထို့ထက် ပို. Build ။
ဗိုလ်ခြေများကိုဖန်တီးပါ, သင့် Turf ကာကွယ်ပေးသည်။ တဘက်အောင်နိုင်ရန်သင့်တပ်မတော်၎င်း ဖြစ်. , Send ။ ရုံခြောသူတို့ t ကိုပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အဆောက်အဦရ™€donâလုပ်!
ဒီအရူးဘောလုံးကာကွယ်ရေးဂိမ်း 20 ကြီးတွေအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ပရိတ်သတ်တွေအများအပြားအမျိုးအစားများဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်
မာရီယိုကိုပင်လယ်ပေါ်မှာ Bowser နှင့်အတူစစ်သွားသည်။ Bowser ကျူးကျော်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ရေးသင့်ရဲ့ရဲတိုက်။ Browser ကိုရေတပ်နစ်မြုပ်ရန်သင့်အားစူပါစမတ်ဗုံးသုံးပြီး Bowser အိမ်မှာ Send ။
ဖုတ်ကောင် vs နွားမ
သင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကိုရောက်စေနိုင်သည့်ကြက်နှင့်နွားမွေးမြူ, တစ်ဦးလယ်ယာစီမံခန့်ခွဲကြသည်။ သို့သော်သင်၏အသက်တာဒါကြောင့်ချောချောမွေ့မွေ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖုတ်ကောင်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်လာကြသူတို့သည်သင်၌လယ်ယာကိုဖျက်ဆီးဖို့ချင်တယ်။ သငျသညျသူတို့ကိုသင်၏အသက်တာကိုအားနည်းစေကြကုန်အံ့မရှိမဖြစ်!